Ndụmọdụ 10 dị elu maka inweta ụgwọ ka mma | Martech Zone
Na Mọnde, Nọmba 14, 2006 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Ọ bụrụ n’ịchọpụtabeghị, enwere m saịtị ọzọ a na-akpọ Payraise mgbako. Enwere m olile anya na ị bara uru. Dịka onye njikwa, m ga-agbakọ ụgwọ ụgwọ maka ndị ọrụ m oge niile - saịtị ahụ toro site na mkpa iji mee ka ọ dị mfe ịgbakọ.
Ọ ga-amasị m tinye ụfọdụ ndụmọdụ na saịtị ahụ otu esi enweta mmụba ka mma. Echere m na ịkwụ ụgwọ bụ ihe dị mkpa maka ọrụ ọ bụla - ọ bụ n'ezie mgbọrọgwụ nke mmata niile. Inweta a "daalụ" ma ọ bụ "oké ọrụ" bụ ibu - ma ọ bụghị mgbe niile na-etinye ego na akpa gị.
Kemgbe ọtụtụ afọ, achọtala m mkparịta ụka ịkwụ ụgwọ dị mfe karịa ka onye ọrụ na dịka onye njikwa - yabụ lee ndụmọdụ 5 m ga-enweta na ịrị elu ụgwọ.
Ọ bụrụ n ’ọ dị gị ka i tozuru ya, anabataghị ụgwọ a kwụrụ gị. Ndị njikwa na-enwekarị akọ n'ime ego ha ma nwee ike inyekwu nkwalite karịa ka enyere ha n'ezie.
Na nyocha gị, jide n'aka na ị na-ekwu maka uru ị na-eweta na ụlọ ọrụ, ọ bụghị ụgwọ ụgwọ ọnwa. Ọ dị mkpa na ndị were gị n’ọrụ na-ahụta gị dị ka akụnụba. Ọ bụrụ na ị bụ ezigbo ego, ha agaghị eche ịzụrụ ngwaahịa na gị.
Zere iji onwe gị atụnyere ndị ọrụ ndị ọzọ. Ọ dịghị ahụ mma iji onwe gị atụnyere onye ọrụ ọzọ nke nwere ike ịkpata ego karịa gị. Ihe a na - agbanyụ ndị njikwa - yana ọnụahịa arụmọrụ, mmụba ụgwọ bụ akụkụ na-agwụ ike nke ọrụ ha. Iji onwe gị atụnyere ndị ọzọ nwere ike iwepụ gị karịa inyere gị aka. Nakwa iji onwe gị atụnyere ndị ọrụ ọzọ 'otu' gị na ndị ọrụ ndị ọzọ. Ọ dị mkpa ka ị nweta aha maka onwe gị.
Mara ihe ọnụ ahịa ndụ na-aba maka mpaghara gị. Ọ bụrụ na a na-enye gị mmụba 3% na mpaghara nwere 4% ọnụ ọgụgụ nke ndụ abawanye… maa gịnị?! Nwetara ụgwọ ọnwa gị!
Nweta nkwekọrịta na nyocha ọ bụla / akwụ ụgwọ na ihe ụgwọ ụgwọ gị bụ n'ezie yana ihe ị ga-emerịrị iji nweta ezigbo mmụba. Ọ bụrụ na onye njikwa gị na-enye gị ebumnuche 5 iji nweta mmụba 5%… wee jide n'aka na ị mezuru ebumnuche ndị ahụ ma chetara ya / ihe ịga nke ọma gị - ọbụlagodi tupu nyocha gị ọzọ.
Atụla egwu ịjụ maka mmụba ụgwọ na mpụga nke usoro ndụ gị. Ọ bụrụ n ’ị kụrụ sọks nke onye njikwa gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị, jiri oge ahụ gwa ha ka ha gosipụta ekele ha site na mmụba akwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na anabataghị ya, jụọ maka ego.
Mara ụdị ụgwọ ọnwa gị bụ maka mpaghara gị yana maka ọrụ gị. Enwere ọtụtụ saịtị na ozi a, otu n'efu bụ N'ezie.com.
Ọ bụrụ n ’ịnọ n’esemokwu ịkwụ ụgwọ siri ike, rịọ maka nyocha ụgwọ ọnwa nke ngalaba ọrụ gị ma ọ bụ tinye ego na ya n’onwe gị. Salary.com na-enye nyocha nyocha zuru ezu Ebe a.
Tinye uche na mbọ ị na-agba na ebumnuche metụtara ala. Ọzọ ahịa, mma ahịa njigide, uru-kwukwara ọrụ, rụọ ọrụ usoro, ịcha mmefu ego… ọ bụ a dum ọtụtụ mfe ịrịọ a na-akwụ mmụba mgbe ị na-enye siri ike dollar na cents na ihe ị gbakwunye na ala akara.
O bu ihe nwute, anyi bi n'ime oge ebe otutu oru diri otutu ndi ruru eru, ndi oru. Onu ogugu ugwo ugwo karie nke ị gha achota bu iru nke ị na enweta mgbe inwere onye oru gi ma chọta oru ozo. O di nwute, mana eziokwu! A na-enwe ogologo oge ị nwere ike ịnweta onyinye dị mma tupu ị pụọ mana ị kwesịrị ịjụ onwe gị ihe kpatara ha ga-eji kpebie ịnye gị ya tupu ịpụ kama inye ya gị na mbụ, n'agbanyeghị. O kwesịghị iyi egwu ịhapụ ịhapụ iji nweta ụgwọ a ga-akwụ gị.